ကရင်ပြည်နယ်၊ ကျေးရွာများရှိ ရေဘေးသင့်မိသားစုများအား ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ် | Local Resources Centre
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကျေးရွာများရှိ ရေဘေးသင့်မိသားစုများအား ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်
ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံမြို့နယ် ရွှေတောကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကရံကျေးရွာ ရေဘေးသင့်မိသားစုများအား ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ နှင့် ၅ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းအစီအစဉ်ကို ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့နှင့် ဟက်ပီးဒက်မြန်မာအဖွဲ့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ရာ ဖားအံ။ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရွာပေါင်း ၄၀ ရှိအိမ်ထောင်စုပေါင်း ၈၉၀ ကျော်ကို ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
Flood Relief funds provided to flood-affected community in Kayk Kayan village, Shwe Taw village tract, Hpa-an Township, Kayin State on 3rd December 2018. This program is implemented by Helvetas Myanmar and collaboration with Local Resource Center and Network Activities Group. LRC also distributed funds for agriculture inputs 897 households and cash for rehabilitation 151 households about 40 villages in Hpa-an and Hlaing Bwe township. Also would be provide5schools renovation and providing 150 student kits and5teacher kits.